Tongolo gasy - Resety Thermomix | ThermoRecipes
TRONDRO13 minitraOlona 4
Ity dia iray amin'ireo fanombohana izay tena tianay indrindra. Izy io dia iray amin'ireo raikitra amin'ny Krismasy ary koa ny sisa amin'ny taona, indrindra rehefa manana vahiny izahay.
Vita vetivety fotsiny izy ireo ary ny manan-danja indrindra dia ny fihinanana azy ireo rehefa manamboatra azy ireo satria very ny hafanan'izy ireo avy hatrany (rehefa naka an'ity sary ity izahay dia efa nihinana ny antsasany). Izany no antony nanolorana azy ireo hanompo azy ireo vilany tanimanga mitazona ny hafanana lava kokoa.
Zara raha manampy sira aho, fa resaka tsiro izany. Raha mampiasa isika paty mangatsiaka, esory aloha izy ireo, arotsaho ary ho maina amin'ny taratasy an-dakozia.
Raha tianao izany, amin'ny farany (ao anatin'ny segondra farany) dia azonao atao ny manampy ny ranon'ny voasarimakirana iray, na dia tiako manokana aza ny menaka, ny tongolo lay sy sakay.
Izy ireo koa dia mety hanome anao fikitika manokana ny lovia patoanao. Andramo amin'ireto paty na amin'ity fomba fahandro fusili… Mahagaga!
Aza adino ny mampiasa ny sakay mba hanomezana masaka an'ity lovia ity.
Fotoana hiketrehana: 13M
Fotoana manontolo: 13M
70 g ny menaka oliva virjiny fanampiny
Fehiloha tongolo gasy 5
Sakay cayenne na sakay 1 na 2
350-400 g ny makamba voahitsakitsaka
Arotsanay ao anaty vera sy programa ilay menaka sy tongolo lay 3 segondra, hafainganam-pandeha 5. Midina izahay, miaraka amin'ny spatula, ireo taolam-paty izay nipetraka teo amin'ny rindrina sy teo amin'ny fonony fitaratra mankany amin'ny lelany.
Izahay dia manampy ny sakay sy ny programa 10 minitra, hafanana varoma ary hafainganam-pandehanan'ny sotro, tsy misy vavam-borona ka lasa etona tsara kokoa.
Ampio ny sambo voahopy, efa nafafy sira sy programa kely 3 minitra, hafanana varoma ary hafainganam-pandehan'ny sotro, tsy mametraka ny bikam-bary.
Manala ny vera izahay ary manompo avy hatrany.
Fanazavana fanampiny - Paty misy tongolo lay, tuna kely ary udd / Fusili miaraka amin'ny zucchini sy prawn
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 15 minitra, Navidad, TRONDRO, fitondrana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » TRONDRO » Scampi
Maria Theresa dia hoy izy:
Ataoko ihany koa izy ireo, matsiro izy ireo ……………….
Marina izany, Mª. Teresa. Vita vetivety dia vita izy ireo ary tonga lafatra. Mirary ny soa indrindra.
Ary ho an'ny thermomix taloha? Inona ny hafainganana? Aleo miaraka amin'ny lolo? Misaotra
Salama Maria, amin'ireo 21 tsy maintsy apetrakao amin'ny lolo sy ny volony ny lolo. 1. Fiarahabana.
Tiako ny tongolo gasy. Saripika tena tsara !!
Fa maninona no tsy navoaka ny fomba fahandro ho an'ny salady voankazo sy paty? Tsy maintsy misy ny lesoka.
Misaotra an'ireo resipeonao, tsara izy ireo.
Salama Delfi, hitako tsy misy olana izany. Hitanao sahady ve izany? Miarahaba ary tena faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Salama !!, hataoko izao izao ...
Fanontaniana iray, azon'izy ireo atao ve ny mangatsiaka?
Salama Monica, tsy nanandrana nanala azy ireo aho, tsy fantatro hoe hanao ahoana ny menaka. Manantena aho fa tianao izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
STAR dia hoy izy:
Nataoko an-trano izy ireo tamin'ny herinandro lasa ary fahombiazana tanteraka. Nivoaka teny amin'ny arabe ny fofona.
Te-hisaotra anao aho noho ireo resipeo tsara sy mora. Nataoko koa ny coca legioma ho an'ny namako ary matsiro.
Valiny amin'ny STAR
Faly aho fa tianao izy ireo, Estrella! Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Nataoko ny sambo-kena ary matsiro izy ireo
Tena faly aho, Carmen!
m jose dia hoy izy:
Azon'izy ireo atao amin'ny alàlan'ny sambo mangatsiaka mangatsiaka. Misaotra aho fa ho matsiro toa an'ireo resipeo rehetra
Valio aho jose
Salama, vao tonga tao amin'ny bilaoginao aho ary nahasarika ahy…. !!! Ny ahy fotsiny dia efa nanana thermomix nandritra ny herinandro aho ary tena faly amin'izany… Manana resipeo be dia be aho ka tsy fantatro hoe aiza no hanombohana. Tena tsara ny sambo, hataoko ireo koa heh heh.
Mikasa ny hanao crepes aho fa tsy hitako ... Azonao lazaina ahy ve hoe aiza no ahitako azy? Misaotra… .mba ireo fomba fahandro matsiro rehetra ireo.
Sandra, manana ny crepes vita tamin'ny roa herinandro lasa izay aho saingy mbola tsy nandefa ny fomba fahandro. Hiezaka ny handefa azy aho afaka andro vitsivitsy.
Salama Silvia, tiako be ilay izy… tiako ny zanako vavy ary mety ho fomba mahasalama tokoa ny mampifaly azy ireo.
misaotra ary hitandrina aho ...
Isabel Maria Bermudez dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny bilaoginao, sambany aho niditra ary hitako fa tena mahaliana. oroka
Valiny tamin'i Isabel Mª Bermúdez
Merche dia hoy izy:
Azo atao ve izy ireo ary averina haverina homana ny ampitso?
Mamaly an'i Merche
Virtues González dia hoy izy:
Merche, mieritreritra aho fa tsy misy olana ... Raha mbola ataonao izy ireo ary hampangatsiaka ny tanjona ao anaty vata fampangatsiahana
Valiny tamin'i Virtudes González
embodied dia hoy izy:
Salama, nataoko mangatsiaka izy ireo nefa mivoaka kely rano, nefa tsara
Mamaly an'i incarni
Izany dia mitranga hatrany amin'ireo mangatsiaka, izany no antony namelanao azy ireo hisosotra sy hivoaka mandritra ny ora maro.
Salama !!!! Endrey ny hatsaran'ny fivoahan'izy ireo, fahasoavana maro, eny, nataoko ankavia ny fihodinana mba tsy hanapotehany ahy !!! oroka
Mamaly an'i eva
MMM izay toa tsara, ataoko amin'ny fomba mitovy amin'izany izy ireo, tiako ny prawn :).
Valiny tamin'i Jose Miguel
Mahafinaritra ireto udo ireto! Izy ireo dia lefitra iray ... ary iny mofo iny notampohan-diloilo ...
Salama Leonor, ny mahafaingana ny sotro dia tsy ilaina. Fa tsy maharary velively ny mametraka ny fihodina ankavia. Tsara vintana!
Sara dia hoy izy:
Androany no nanamboarako an'io recette io dia nanjary tsara ... saingy mila milaza aho fa ny makamba somary manta avelako iray minitra lava kokoa. Nanjary mangatsiaka ny sambo, fa efa niempo mialoha. Inona no tsy nety nataoko? MISAOTRA
Mamaly an'i sara
Salama Sara, angamba na dia tratran'ny ivelany aza izy ireo dia mety hoe mbola nangatsiaka ny atiny. Prawn dia vokatra marefo tokoa izay miaraka amina fotoana fahandro kely dia mety. Angamba ny famelana azy ireo hiala sasatra mandritra ny 1 minitra ao anaty vera, fa ny milina novonoina, mety ho ampy. Miankina amin'ny haben'ny makamba ihany koa izany, satria misy azy ireo hatramin'ny kely ka hatramin'ny XL ... Amin'ny manaraka dia manoro hevitra aho fa rehefa lasa ny fotoana dia avelao hiala sasatra 1 minitra ary sokafy makamba raha masaka ao anatiny izy ireo.
Soso-kevitra iray hafa ny defrosting: tsy maintsy esorintsika ny vokatra 24 ora alohan'ny handrahoana sakafo sy ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny toerana mety hivoahan'ny rano be loatra. Avy eo maina tsara amin'ny taratasy mitroka mba hanesorana rano be loatra ka handrahoina tsara kokoa.
Azonao lazaina amiko ny amin'ny manaraka! Famihinana sy fisaorana noho ny nanoratany taminay.
Laly dia hoy izy:
Salama tsara tolak'andro, tratry ny taona. Rehefa atsofoka ao am-bava ny makamba dia tsy mivily miankavia izy ireo fa ny faran'ny taona fotsiny no tadiaviko ary matahotra aho sao tsy hahita tsara. Io dia ho avy ny fianakaviana politika.
Valio i Laly
Salama Laly! Apetrako eo aminy ny ilany havia, sao sanatria. Azo antoka fa tsara ho anao izy ireo. Mirary soa anao amin'izany sakafo hariva izany! Ho hitanao ny fahombiazanao! Fihobiana sy taona vaovao feno fifaliana!
Misaotra anao mamaly ahy haingana be. Tratry ny taona vaovao ary nahatratra ny taona vaovao.
Hadinonao ny nametraka ny fihodinana havia. Nataoko izany fa tsy nivily niankavia ary betsaka ny makamba voatetika voatetika.
Ny hafainganam-pandehan'ny sotro dia tsy misy hery fanapahana fa tena tsara ny anjara birikinao !!
ANJELY dia hoy izy:
Salama!! Mba hanaovana azy ireo amin'ny tm5, mitovy ve ny hafainganam-pandeha sy ny fotoana?
Valio amin'ny ANGELS
Salama Angeles, ao amin'ny programa dingana 2 8 minitra, maripana 120 ° ary amin'ny dingana 3 hametraka mari-pana 120 °. Ny hafainganana dia mitovy. Oroka !!
Nivadika fihodina aho satria nanome ahy fa azo vonoina ny sambo….
Mofomamy paiso vaovao
Aisy gilasy avy any McDonald